Amathuluzi we-SEO aku-inthanethi wezixhumanisi, amagama angukhiye nokulandelwa kwezikhundla
Sihlala njalo sifuna amathuluzi amahle futhi sinemboni eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 5, i-SEO imakethe eyodwa enethoni yamathuluzi wokukusiza. Noma ngabe ucwaninga wena noma ama-backlinks encintisana nawo, uzama ukuthola amagama angukhiye namagama we-cocurrence, noma uzama nje ukuqapha ukuthi isayithi lakho likleliswe kanjani, nanka amathuluzi nezinkundla ze-SEO ezithandwa kakhulu emakethe.
Izici ezibalulekile zamathuluzi wokuSebenza we-Search Engine nama-Platform wokulandelela
Ukucwaningwa kwamabhuku - Ukuhlolwa kwe-SEO kukhasa isayithi lakho futhi kukwazise ngezinkinga ezingathinta amazinga akho.
Ukuhlaziywa kwe-Backlink - uma isayithi lakho lixhunywe kumasayithi aneziphathimandla ezingezinhle zokusesha, ungaba nesikhathi esibi kakhulu. Ukukwazi ukuhlaziya ivolumu nekhwalithi yezixhumanisi ezikhomba ezizindeni zakho kubalulekile ekuxazululeni izinkinga ezisezingeni eliphakeme zezinkinga ezisezingeni kanye nokuhlaziywa kokuncintisana.
Ucwaningo Lokuncintisana - ikhono lokungena noma ukuthola izimbangi zakho, amazinga abo, nokuthi yini ehlukanisa isizinda sabo namakhasi kwesakho ukuze ukwazi ukubona izikhala okufanele uzigcwalise.
Idatha yokuThola - Okulahleka ngokuxakile kuningi lalezi zingxenyekazi yikhono lokumaka, ukuhlukanisa, ukuhlanganisa, imayini yedatha, nokuthuthukisa imibiko kumasethi wamagama abalulekile amakhulu kakhulu.
Ukutholwa kwegama elingukhiye - ngenkathi amapulatifomu amaningi wokuqapha ekunikeza amazinga afanele, awakuvumeli ukuthi uthole ukuthi yimaphi amagama angukhiye ongabekwa kulokho ongawazi.
Ukuqoqwa kwamagama angukhiye - Ukuqapha amagama ambalwa angukhiye kungenzeka kunganikezi isithombe esinembile njengokuqoqa inhlanganisela yamagama asemqoka afanayo nokubika ukuthi wenza kanjani ngokuphelele kusihloko. Ukuqoqwa kwamagama asemqoka kuyisici esihle samathuluzi wokuqapha amazinga e-SEO.
Ucwaningo Elingukhiye - ukuqonda igama elingukhiye elihlobene nemikhiqizo nezinsizakalo ozihlinzekayo kubalulekile emizamweni yakho yokumaketha okuqukethwe. Amathuluzi wokucwaninga ngegama elingukhiye avame ukunikela ngamagama angukhiye wokuhlangana, izinhlanganisela zamagama ahlobene nombuzo, inhlanganisela yamagama asemisileni omude, nokuncintisana kwegama elingukhiye (ukuze ungachithi isikhathi sakho uzama ukukala ngokwemigomo ongeke ube sethubeni lokuthola ukudonswa kuvuliwe.
Ukuqapha Ukusekwa kwegama elingukhiye - amandla wokufaka amagama asemqoka bese ubheka izinga lawo ngokuhamba kwesikhathi kuyisici esiyinhloko samapulatifomu amaningi. Njengoba kunikezwe ukuthi imiphumela yokucinga yenziwe ngezifiso kakhulu, leli khono lisetshenziselwa kakhulu ukuhlaziywa okuhamba phambili ukubona ukuthi imizamo oyenzayo iyasithuthukisa isimo sakho ngamagama angukhiye noma cha.
Ukuqapha Kwesikhundla Segama elingukhiye lendawo - ngoba indawo lapho umsebenzisi wokusesha nebhizinisi lakho lingadlala khona indima enkulu, amapulatifomu amaningi wokuqapha amagama angukhiye ahlinzeka ngezindlela zokulandela umkhondo wesikhundla sakho ngokwendawo.
Ukukhuhla nokuhlaziywa kwangaphakathi - Amathuluzi ahlaziya isikhundla sabaphathi besiza sakho, ukwakhiwa kwamakhasi, isivinini sekhasi, nezinye izingqinamba ezihambisanayo kuhle kakhulu ekulungiseni izingqinamba ezingase zingabonakali kahle kepha ezingakudalela izinkinga eziningi lapho usezingeni.
Abelana Ngezwi - imibiko yezobunhloli yokuncintisana enikezela ngomkhiqizo wakho indlela yokulandela ngomkhondo ukukhombisa isabelo sakho sosesho nezingxoxo zenhlalo eziku-inthanethi zikubonise uma wenza inhloko. Ngemuva kwakho konke, ungahle ukwandise ukubonakala kosesho lwakho, kepha mhlawumbe oncintisana naye wenza umsebenzi ongcono kakhulu.
Ithonya Lomphakathi - Kungokwemvelo ukuthi ukunakwa okuheha kuyo yonke imithombo yezokuxhumana kuyinkomba enkulu yegunya olakhe ngezinjini zokusesha. Amapulatifomu amasha we-SEO ahlinzeka ngokuqondisisa kokuhlobana phakathi kosesho nezenhlalo futhi kuyakhokha!
Ucwaningo lwe-Youtube - okuvame ukunganakwa, i-Youtube iyinjini yokusesha engu- # 2 emhlabeni njengoba amabhizinisi amaningi nabathengi becwaninga ngezihloko abafuna izincazelo zamavidiyo, amaphrofayli womkhiqizo, nokuthi kwenziwa kanjani.
Uhlu Lamathuluzi Womphathi Wewebhusayithi Yokusesha
Amathuluzi we-Bing Webmaster - thuthukisa ukusebenza kwesayithi lakho ekusesheni. Finyelela imibiko yamahhala, amathuluzi nezinsizakusebenza.
Amathuluzi Omsebenzi Wewebhu we-Google - ikunikeza ngemibiko enemininingwane ngokubonakala kwamakhasi akho ku-Google.
Uhlu lwamathuluzi we-SEO wezixhumanisi, amagama angukhiye nokulandelwa kwezikhundla
I-AccuRanker - Shintsha inqubo yokubheka ukuthi amagama akho angukhiye akleliswa kanjani ezinjinini zokusesha ze-Google neze-Bing ngezibuyekezo ezisesikhathini.
Isikhundla sewebhu esithuthukile - Amazinga amasha nsuku zonke, masonto onke nangokudingeka kakhulu. Okwesizinda sedeskithophu, iselula nendawo. Kupakishwe kahle emibikweni yelebula emhlophe. Iyatholakala kusuka kunoma iyiphi idivayisi.
Ama-Ahrefs I-Site Explorer - Inkomba enkulu kunazo zonke futhi entsha sha yezixhumanisi ezibukhoma. Inkomba ivuselelwa njalo ngemizuzu engu-15.
I-AuthorityLabs - Sebenzisa isikhundla sethu senjini yokusesha nedatha yegama elingukhiye ukuze usebenze ngokuqapha kwakho kwe-SEO, ulandelele amazinga wangakini nawamaselula, uphinde uthole amagama angukhiye anganikezwanga.
IBlueEdge SEO iyipulatifomu yokuqala ye-SEO yokuletha i-ROI efakazelwe - evumela abathengisi ukuthi benyuse imali etholakala kusesho lwezinto eziphilayo ngendlela elinganisekayo nengabikezelwa.
I-SEO Yokuqonda Izici ezihlukile ze-SEO ezizothuthukisa ukuhlaziywa kwakho kwezixhumanisi nemiphumela yokwakha isixhumanisi.
colibri ikunikeza ukuqonda kokuthi ungathola kanjani ithrafikhi eningi namakhasimende avela ku-SEO.
Umbani Wokusesha iyipulatifomu ye-SEO esetshenziswa kakhulu - inika amandla abathengisi bamabhizinisi ukulawula ukusebenza kwabo kosesho.
Ipulatifomu Yokumaketha Ephakathi kweCuutio - Yazi izikhundla zakho ngqo nesimo sokuncintisana ku-Google, landela imiphumela ye-
ukwenza kahle izinjini zokusesha futhi uhlaziye ukusebenza jikelele kwamagama akho abalulekile
Ama-Dragon Metrics inikeza ukuhlaziywa nokuqonda okudingayo ukukala abancintisana nabo futhi uphendule ukubikwa kwanyanga zonke kube umoya.
Hlola amagama angukhiye ithuluzi lamahhala lokucwaninga ngegama elingukhiye kufaka phakathi isihloli sevolumu elingukhiye, i-generator yamagama asemqoka, i-generator yamagama abalulekile, ne-generator yamagama angukhiye e-Youtube.
Ama-Ginzametrics kwenza i-SEO yebhizinisi ibe lula futhi ukuphela kwesikhulumi esisiza abathengisi ukwenza imali ngokuphumelelayo kuthrafikhi kusuka kusesho lwe-organic.
I-SEO ye-gShift isoftware ibeka phakathi idatha ye-SEO yamakhasimende akho (isikhundla, ama-backlink, izimpawu zomphakathi, ukuhlakanipha kokuncintisana, i-Google Analytics kanye nocwaningo lwamagama asemqoka) futhi inikeza imibiko ye-SEO ezenzakalelayo, ehleliwe, enombhalo omhlophe eshiya isikhathi esiningi seqembu lakho lezinsizakalo ukwenza imisebenzi ye-SEO ezokwenza thuthukisa ubukhona bewebhu yamakhasimende akho.
Isixhumanisi - I-backlink tracker elula ukusebenziseka futhi engabizi
I-SEO enkulu - Xhumanisa amathuluzi wobuhlakani we-SEO ne-Internet PR nokuMaketha. I-Site Explorer ikhombisa idatha yokuxhumanisa engenayo nedatha yesayithi.
I-Meta Forensics - I-Meta Forensics ukwakhiwa kwewebhusayithi, ukuhlaziywa kwesixhumanisi kwangaphakathi nethuluzi le-SEO elisiza ukukhomba izinkinga ezingabonakali zewebhusayithi ezingathinta izivakashi zakho, abakhasi bezinjini zokusesha futhi ekugcineni, kuphazamise isiza sakho.
Hlola i-Backlinks - Gcina yonke imininingwane yakho yokuxhumanisa ngaphansi kophahla olulodwa ngamathuluzi ethu okuphatha.
I-Moz - Isoftware esezingeni eliphezulu kunazo zonke ekilasini ye-SEO kuzo zonke izimo, kusuka kungxenyekazi yethu yonke ye-SEO kuya kumathuluzi we-SEO yendawo, ama-analytics ebhizinisi le-SERP, ne-API enamandla.
umabheol - I-SEO Software Esetshenziswa Izinkulungwane Zama-Web Designers, ama-SEO Consultants nama-Agency ukuphatha amaklayenti abo e-SEO.
Isihloli seNetpeak - ithuluzi lokucwaninga elenzelwa imisebenzi eminingi lokuhlaziywa kwe-SEO ngobuningi. Ithuluzi linesici esiyingqayizivele esivumela ukuhlaziya isu lokuphromotha labancintisana nabo nokucwaninga iphrofayli ye-backlink yamawebhusayithi esincintisana nabo.
Iwashi lasebusuku - I-SEO performance tracker ne-analytics ithuluzi
Ontolo - I-Link Building Toolset yethu iye yaba enye yamathuluzi wokumaketha i-inthanethi akhuthazwa kakhulu futhi axhumanisa amathuluzi okwakha yi-SEO ephezulu kanye nochwepheshe bezokwakha izixhumanisi zamakhono ezisebenzelayo nawokuxhumanisa angaba khona.
Posirank - Ipulatifomu yethu ethengisa kakhulu ayigcini nje ngokufaka yonke insizakalo ye-SEO ongayicabanga kudeshibhodi eyodwa - futhi isekela ukuzenzakalela okuphelele.
Isikhundla inamandla, amathuluzi asebenziseka kalula enza ukuthuthukisa iwebhusayithi yakho kube yinto ejabulisayo. Gada izinguquko zansuku zonke, ulinganise ukusebenza kwe-SEO, futhi uthuthukise amazinga ezinjini zokusesha ngokulula.
I-Pro simo Tracker - Thola okuningi usesikhathini, kulula ukuhlaziya imininingwane esezingeni kuwo wonke amawebhusayithi akho, ukuze uhlale isinyathelo esisodwa ngaphambi komncintiswano futhi ukwandise inzuzo yakho.
I-RankAbove's Drive Ipulatifomu ye-SEO kanye nesoftware yezobunhloli bebhizinisi ikuvumela ukuthi ungene ngokujulile kulwazi lwe-SEO oselutholakale kalula.
Izinga - Bheka izikhundla zakho zewebhusayithi bese uhlaziya izimbangi zakho kuzinjini zokusesha ezithandwayo ngesikhathi sangempela.
SimoRanger - Imibiko yansuku zonke kanye nokuqonda impumelelo yakho ye-traffic nokukhangisa kuwebhusayithi yakho.
IzingaScanner - Bheka izikhundla zamagama akho angukhiye kuGoogle nge-akhawunti yamahhala.
Izinga Tracker by SpySERP - Inikeza abaqalayo be-SEO nochwepheshe ngokufanayo ithrekhi yangaphakathi ekusebenzeni kwekhasi labo lewebhu kuzinjini zokusesha eziningi.
IsikhundlaSonic - Landela izinguquko zansuku zonke emazingeni akho, thola isayithi eliphambili analytics, hlola izimbangi zakho futhi uthuthukise amazinga akho enjini yokusesha.
IzingaWatch - Ukuhlaziywa kwesikhundla, iwashi le-backlink, iziphakamiso zamagama asemqoka, ukufaka amalebula amhlophe, ukubika kanye ne-analyzer yewebhusayithi.
Raven inamathuluzi angama-30 + okusiza ekutholeni imiphumela kuyo yonke le misebenzi yokuthengisa online.
I-Rio SEO iyipulatifomu engcono kakhulu ye-SEO yokuletha impumelelo yokusesha komhlaba wonke ku-Organic, Local Search, Mobile and Social Media yamaTop Brands nama-Agency.
Izindlela zokucinga - Search yethu nezenhlalo analytics i-software Searchmetrics Suite enokuhlaziywa okususelwa kudatha nezixazululo ezihlakaniphile kwenza abathengisi nama-SEO bakwazi ukuqapha nokwenza ngcono izenzo ze-SEO zikazwelonke noma zamazwe omhlaba ngaleyo ndlela zikhuphule isabelo semakethe, imali engenayo kanye nenzuzo.
SEOCHECK.io - isheke lamagama angukhiye wamahhala ekuvumela ukuthi ulandelele amagama angukhiye angama-50.
Umthengisi we-SEO - isixazululo esiphelele esinelebula elimhlophe kuma-ejensi nababonisi bokusesha ukuhlinzeka ngazo zombili inkundla, ukubika, kanye nezinsizakalo kumakhasimende abo.
Inyoka - ithuluzi lokulandela ukusebenza kwegama elingukhiye kuma-SERP. Kufaka phakathi ukulandela umkhondo nokubambisana.
I-Serpstat - ipulatifomu yonke-in-one ye-SEO ene-SEO Audits, Competitor Research, Backlink Analysis, Search Analytics kanye ne-Rank Tracking.
Isiphelelisi se-SERP - Ithuluzi le-SEO lokwakha izixhumanisi, ukuhlolwa kwewebhusayithi nokuqapha igama elingukhiye.
SerpYou - I-interface ehlanzekile futhi elula ukuyisebenzisa futhi iyashesha futhi inembile.
I-SE usezingeni - uhlelo lokuqapha injini yokusesha oluhlinzeka ngezixazululo zombili ezisingethwe nezisingathwa.
Semrush idalwe ngabachwepheshe be-SEO / SEM bezingcweti ze-SEO / SEM. Sinolwazi, ubuchwepheshe, nedatha ukukusiza ukuthi uhambise amaphrojekthi akho ezingeni elilandelayo. Baqoqa inani elikhulu lemininingwane ye-SERP ngamagama angukhiye angaphezu kwezigidi eziyi-120 nezizinda eziyizigidi ezingama-50.
Ikamela le-SEO - Ikamela le-Seo lenza ukuhlaziywa okuphelele kwenjini yokusesha kumawebhusayithi wakho, noma izimbangi zakho.
Isikhundla se-SEO Monitor - Thuthukisa amazinga akho, Landela izimbangi zakho, futhi ubheke ukusebenza kwe-SEO ngokulandela umkhondo ophelele kakhulu embonini.
OkunyeKu - Ukusebenza Kwezinjini Zokucinga Kwenziwe Kulula. Ukuhlaziywa nokusebenziseka kalula kwe-SEO yesayithi lakho.
Ukuskena kwe-SERP - ilandelela isikhundla senjini yakho yokusesha yamagama angukhiye abalulekile kuwe.
I-SERPWoo - Gada YONKE Imiphumela Ephezulu engama-20 + ngamagama akho angukhiye bese uthola izexwayiso lapho izimbangi zikhulisa ama-backlinks azo, amasiginali womphakathi, amazinga, nokuningi.
Amamethrikhi wohlu olufushane - ithuluzi elilula ukukala ukwakha kwakho isixhumanisi ngokushesha.
I-Siteoscope - Ukuhlelwa kwegama elingukhiye, ukulandelwa komncintiswano, ukuhlaziywa kwemithombo yezokuxhumana nokubika okuzenzakalelayo.
I-SerpStat Ithuluzi Lesiphakamiso segama elingukhiye - amagama angukhiye athandwayo nezinhlobo zawo ezahlukahlukene ezisetshenziswa ngabantu abafuna imikhiqizo ethokozisayo, izinsizakalo noma imininingwane.
I-SpyFu iveza ifomula eliyimfihlo lokukhangisa lokusesha labancintisana nabo abaphumelele kakhulu. Sesha noma isiphi isizinda bese ubona yonke indawo abakuvezile ku-Google: wonke amagama angukhiye abawathengile ku-Adwords, kuwo wonke amazinga e-organic, nakuwo wonke umehluko wesikhangiso kule minyaka engu-6 edlule.
I-SyCara's Ipulatifomu ye-SEO inikeza abasebenzisi ukuphathwa kokuhamba komsebenzi okuhola phambili embonini, amazinga osesho lwendawo, ukubikwa kwemithombo yezokuxhumana, kanye nokuhlaziywa kwe-SEO.
Isikhundla Esincane - Gcina umbhalo walokho amazinga akho kanye onpage SEO imizamo.
I-Topvisor - Imikhiqizo Yezentengiso Yedijithali ne-Software Analytics Software. Yizame ngokulandela amazinga angukhiye angama-200 mahhala.
Unamo - Thola ithrafikhi eningi, uthuthukise amazinga akho bese ushiya umncintiswano ngemuva.
UpCity - Vumela i-UpCity isize ibhizinisi lakho elincane lithole ithrafikhi yamahhala kuzinjini zokusesha, imithombo yezokuxhumana kanye nezikhombisi zendawo.
I-WebMeUp Amathuluzi we-SEO ahlanganisa ukusebenziseka kalula kwesoftware ye-SEO eku-inthanethi ne-data-richness kuphela izinhlelo zokusebenza zedeskithophu ezinganikeza.
Yini i-SERP yami - Isihloli se-SERP samahhala seWhatsMySerp sikuvumela ukuthi uhlole imiphumela yokusesha ephezulu ye-100 ye-Google ngamagama angukhiye amaningi. Ungayisebenzisa ukuhlaziya ama-SERPs nokubheka ukuma kwewebhusayithi yakho.
WooRank liyibanga eliguqukayo esikalini samaphoyinti ayi-100 esimele ukusebenza kwakho kokumaketha kwe-inthanethi ngesikhathi esithile. (Amaphuzu amaphakathi angama-50.) I-WooRank isuselwa ekubuyekezweni kwewebhusayithi yezici ezingama-70 ezisukela kumagama asemqoka kuya ekusebenzeni nasekuqapheni komphakathi. Ngaphezulu kwenombolo, ukubuyekezwa kwe-WooRank kukunikeza imininingwane ebalulekile namathiphu wokukusiza uthathe umhlaba oku-inthanethi ngesiphepho.
I-Wordtracker inikeza amathuluzi we-Keyword Research we-SEO ne-PPC, ama-Rank Tracking namathuluzi wokuHlaziya amaSayithi.
Qaphela: Sinama-akhawunti wokusebenzisana namanye ala mapulatifomu.
Tags: uchwephesheahrefsasia seoamalebhu okuphathaamagunya okuphathaukuhlaziywa kwe-backlinkukutholakala kwe-backlinkinsizakalo ye-backlinkukuxhuma emuvaama-backlinksithuluzi lokubeka igama elingukhiye elingcono kakhuluamathuluzi amahle kakhulu we-inthanethibing abaphathi bewebhuukukhanyai-brighted seobrightedge vs umqhubihlola igama elingukhiyehlola igama elingukhiyehlola amazingahlola amazinga wenjini yokuseshahlola lokho simoi-colibricolibri seoamathuluzi we-colibri seoucwaningo lokuncintisanai-cuutiodiyseoAma-Dragon MetricsIsihloli se-firefox rankisikhundla samagama asemqokaisihlonzi samagama asemqoka elingukhiyeusezingeni elingukhiye lamahhalaithuluzi lokubeka igama elingukhiye lamahhalaukulandelwa kwamagama asemqoka kwamahhalaisheke samahhalatracker yezinga lamahhalaisihloli samahhala se-seo rankzinzokuhleIthuluzi lokulandela igama elingukhiye le-googlei-google rank trackerumhloli wezinga le-google seoabaphathi bewebhu be-googlei-gshiftamalebhu we-gshiftubhekeungalihlola kanjani igama elingukhiyemarketing kwangaphakathiukuphathwa kwamagama asemqokaIthuluzi lokuphatha elingukhiyeigama elingukhiye isikhundla trackerukulandela ngomkhondo igama elingukhiyeigama elingukhiye umphathi wephrojekthiisheke lamagama asemqokaIthuluzi lokuhlola igama elingukhiyeisoftware yamagama asemqokaelingukhiye isikhundla trackerukulandelwa kwegama elingukhiyeigama elingukhiye software yokulandelelaigama elingukhiye leshekeigama elingukhiye simo simoigama elingukhiye imibiko yokubekaisoftware yokubeka igama elingukhiyeelingukhiye simo ithuluzi freeamathuluzi wokubeka amagama angukhiyeelingukhiye usezingeni trackerithuluzi lamagama wegama elingukhiyeucwaningo lwegama elingukhiyeIthuluzi lesiphakamiso segama elingukhiyeamathuluzi wegama elingukhiyeukulandelwa kwegama elingukhiyeisoftware yokulandela igama elingukhiyeithuluzi lokulandela igama elingukhiyeamathuluzi wokulandela amagama angukhiyeukwakha isixhumanisiisixhumanisimkhulungokubabazekayo seoimeta forensicsqapha amazinga wenjini yokuseshamoz isikhundla sokuhlolaokuhlola i-netpeakokuhlola isikhundla onlinei-tracker ye-inthanethionline simo ithuluziontoloikhasi lokuqala seoumkhondo wesikhundla sekhasiposirankpro isikhundla trackerokuhlola isikhundlai-rank checker chromeithuluzi lokuhlola isikhundlaisoftware yokuhlola isikhundlaithuluzi lokuhlola isikhundlaisikhundla elingukhiyeisoftware yerenkiisikhundla se-trackeri-track tracker mahhalaisikhundla tracker seoisoftware ye-trackerithuluzi le-trackerukulandelela isikhundlaisoftware yokulandela isikhundlaithuluzi lokulandela umkhondoamathuluzi wokulandelela amazingasimo ishekeusezingeni lokuhlolaisoftware yokubika esezingeniisoftware esezingenisimo amathuluziusezingeni trackerisikhundlairenkiumabhebhanabhekumuziI-ravenRaven Toolsbhekumuzisimo sangempelaukubikauthi lokhose intelusezingeniinjini yokucinga isikhundla trackerinjini yokusesha trackerUkulandelwa kwezinga lenjini yokuseshaisoftware esezingeni lenjini yokuseshaisoftware yenjini yokuseshausesho lokuhlola isikhundlasemrushukuhlaziywa kwe-seolokho asiaIsihloli sencwadi yencwadi leyolokho amathuluzi encwadiseo isiphequluliikamela leloIthuluzi lokubeka igama eliyisihluthuleloLokho elingukhiye trackerUkulandela ngomkhondo igama elingukhiyeithuluzi lokuphatha lokhoamathuluzi wokuqapha lokhoizinkundla ze-seookuhlola isikhundla se-seookuhlola isikhundla serenkiqapha isikhundla serenkiumbiko werenki leyoisofthiwe ye-seo rankithuluzi lerenki ye-seolokho rank amathuluzitracker seo isikhundlaUkulandela umkhondo we-seo rankokuhlola okusezingeni eliphezuluUkuqapha kwesimo se-seoisoftware yokubika esezingeniisofthiwe esezingeni le-seoIthuluzi le-seo simoamathuluzi we-seo simotracker esezingeni le-seoisoftware yokubika lokhoisoftware yokubika lokhoIsihloli sezinga lethuluzi le-seoama-seo amathuluziamathuluzi we-rank checkerlokho trackerUkulandela ngomkhondo lokhoisoftware yokulandela lokhoithuluzi lokulandela lokhoamathuluzi okulandela lokhoisihloli sezinga le-seobookukuhlolaamadia.iosemozsemoz proseomoz amathuluzi proseomoz amathuluziukuthuthumelaUkuhlaziywa kwenyokaukuskena kwenyokaizinyoniserps.comi-serpstatumabhebhanaolufinqiweumagazinespyfuumhloliisikhundla esincaneumphathilandelela ama-imeyiliamazinga wegama elingukhiye le-tracktrack angukhiyeithuluzi elingukhiye le-twitterunamoidolobhaisoftware esezingeni lewebhuwebmeupisoftware esezingeni lewebhusayithiwordtrackerAmagama angukhiye e-YouTube
Mar 27, 2013 ku-10: 29 AM
Lokho uhlu oluhle. Vele kukhombisa ukuthi kungakanani okusamele ngifunde nge-SEO!
Mar 27, 2013 ku-2: 07 PM
Ngiyabonga! Izindatshana zethu ze-SEO kufanele zikunikeze okudingayo.
Mar 28, 2013 ku-3: 45 AM
Uhlu olukhulu, ngiyabonga. Kepha ngicabanga ukuthi i-webceo ilahlekile, kuyisethi enhle yamathuluzi we-inthanethi we-inthanethi wokucwaninga iwebhusayithi yakho bese uyayisebenzisa.
Mar 28, 2013 ku-8: 08 AM
Mar 28, 2013 ku-10: 06 AM
Sawubona Zac, ngibheke iWebCEO futhi leyo yingxenyekazi yedeskithophu yeWindows. Sigxile kumathuluzi aku-inthanethi lapha. Ngiyabonga!
Mar 28, 2013 ku-5: 30 AM
Impela imakethe eminyene - futhi lolu hlu lumane lungaphezulu kweqhwa! Uma ufisa ukwenza okuthunyelwe okufanayo kodwa kuqondene namathuluzi we-SEO yendawo sicela usazise - singajabula ukunikela ngokuqukethwe nokusiza nge-curation. Ngiyabonga uDouglas
Ngo-Apr 2, i-2013 ku-5: i-42 PM
Sawubona, thina ku-SERP Scan sisanda kukhipha isici sokulandela umkhondo wasendaweni. Noma yiliphi ithuba lokusifaka kuDouglas? Ngiyabonga!
Ngo-Apr 2, i-2013 ku-10: i-56 PM
Ukuvuselelwa, kubukeka njengethuluzi lamathuluzi elihle.
Ngo-Apr 3, i-2013 ku-4: i-56 PM
Ngiyabonga Michael! Ngikungezile ohlwini.
May 27, 2013 ku-4: 21 AM
Siyabonga ngokufaka iWebMeUU, iDouglas!
Ngale ndlela, sisanda kufaka imodyuli ye-Social Media kuWebMeUp. Ngakho-ke, umuntu angasho ukuthi asiyona isoftware ye-SEO manje. 😉
UJun 24, 2013 ngo-1: 01 AM
Ngisebenzise amathuluzi ambalwa ukulandelela amazinga kumakhasimende ethu kepha ngidinga isiphakamiso kuthuluzi elingalandelela amazinga wamagama asemkhawulweni angenamkhawulo. Sidinga eyodwa yengosi ye-e-commerce enamagama angukhiye angamashumi ukulandela.
UJun 24, 2013 ngo-8: 24 AM
Amaklayenti ethu asebenza ngalolo sayizi asebenzisa i-Conductor, @disqus_wFlYDncKKH: disqus. Akubizi kepha kunamamojula amahle wokuqoqa nokubika. Ungathenga nezikripthi zakho zokulandela umkhondo wezikhundla - kepha akukhona okokuphela kwenhliziyo njengoba izinjini zokusesha zizama ukuvimba lezi zinsizakalo ngangokunokwenzeka.
Jul 18, 2013 ku-10: 22 AM
Uhlelo oluhle kakhulu lwe-SEO lweThuluzi uDouglas! I-WebMeUp isibe yinye yezintandokazi zami. Imakethe Emangele I-Samurai ayizange yenze uhlu olufushane?
Jul 18, 2013 ku-11: 03 AM
Indawo yemakethe ye-LXR inohlu olude lwamathuluzi amahle enziwe lula kubaninimabhizinisi abancane abafuna ukwenza i-SEO yabo
Uhlu olukhulu! Ezinye bezingajwayelekile futhi ngidinga ukuzizama. Kulokhu ngisebenzise ama-Searchmetrics kakhulu, kepha uCuutio kufanele abe sohlwini, futhi, ngicabanga (www.cuutio.com)
Aug 23, 2013 ngo-3: 28 PM
Ngicabanga ukuthi ungabheka ithuluzi lethu - positionly.com. Thatha i-spin bese uzihlolela 🙂 ngineqiniso lokuthi izofinyelela amazinga akho.
Ngaphandle kwalokho, ngithanda izitaki ezinjengalezi. Onke amathuluzi awusizo ahlanganisiwe. Kuhle!
Aug 24, 2013 ngo-6: 49 PM
Ngiyabonga Krystian! Ukungeze ohlwini.
Jul 3, 2014 ku-7: 23 AM
Sawubona lapho! uhlu olukhulu ungazama futhi i-seo rank monitor, ngiyithande kuze kube manje..basanda kukhipha inguqulo entsha, (engicabanga ukuthi) ebukeka iyinhle kakhulu.
Jul 3, 2014 ku-9: 22 AM
Ngiyabonga! Kungezwe ohlwini.
Jul 8, 2014 ku-10: 06 AM
Ungasibheka ngokushesha isixazululo sethu sokwephula umhlaba ku- https://www.serpwoo.com/?
Sinama-akhawunti amahhala futhi akhokhelwayo, futhi sinikela ngokulandela umkhondo kwezobunhloli kwe-SERP ngamagama asemqoka athile esiwalandelela wonke amalungu.
Siyabonga ngokubheka futhi ngiyethemba ukuthi ngizokwazi ukukusiza ngesixazululo sethu uma usidinga.
Jul 8, 2014 ku-11: 07 AM
Kuhle, singeze ithuluzi lakho ohlwini.
Aug 15, 2014 ngo-2: 01 PM
Sawubona, ngeshwa akutholakali ohlwini lwe http://rankinity.com. Ngisebenzisa le phrojekthi ngoba ikala ukulandela umkhondo ngesikhathi sangempela.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasiza kuwe.
Aug 15, 2014 ngo-4: 01 PM
Ngiyabonga! Ngikungezile ohlwini!
Okuthunyelwe okuhle kepha ithuluzi engilithandayo ngama-ahrefs 🙂
Okthoba 7, 2014 ngo-4: 26 AM
Bheka neMeta Forensics futhi: http://metaforensics.io. Ithuluzi eliku-inthanethi elifana namathuluzi wedeskithophu 'Ukukhala Ixoxo' ne 'Xenu Link Sleuth'. Iphuzu eliyinhloko lokwehluka ukuthi lokho kunikeza nemibiko eningiliziwe ekwakhiweni kwewebhusayithi futhi inikeze abasebenzisi imininingwane engenzeka ngezinkinga ezingaba khona kuwebhusayithi yabo.
Dec 15, 2014 ku-6: 31 AM
Uhlu oluhle kakhulu lwamathuluzi we-SEO… Angikaze ngikubone ngaphambili..Siyabonga kakhulu Douglas Karr
Mar 17, 2015 ku-6: 38 AM
Ngabe ungabheka insiza yethu https://ranksonic.com bese uyifaka ohlwini lwakho?
Singanikeza wonke umuntu obhalisile we-Marketingtechblog ngesaphulelo esithile 🙂
Mar 18, 2015 ku-12: 35 PM
Ngo-Apr 11, i-2015 ku-4: i-28 PM
Uhlu olukhulu! Iyamangalisa ngempela ngawo wonke lawo mathuluzi, kepha ukhohlwe i-RankScanner - ukuyisebenzisa masonto onke, futhi ilungele noma yiliphi ibhizinisi, mhlawumbe ngaphandle kwamabhizinisi engiqagelayo. Ngacabanga ukuthi bekufanele ukushiwo.
Ngo-Apr 11, i-2015 ku-4: i-40 PM
Ngiyabonga Thomas, siyingezile.
UJun 8, 2015 ngo-10: 34 AM
I-RankSonic inika imiphumela ehlaba umxhwele ngesikhathi esinqunyelwe sanoma yiliphi ibhizinisi futhi ungakwazi ukulandelela inani elikhulu lamagama asemqoka. Kuzwakala kukuhle kimi. Futhi lokho kungukuthengiselana kwewebhusayithi yami. Futhi banezici eziningi ezipholile.
Jul 13, 2015 ku-2: 03 AM
Sawubona Douglas, singathanda ukuba nethuluzi lethu kulolu hlu futhi - http://www.siteoscope.com
Kungeziwe! Kubukeka njengephakheji enhle.
Jul 16, 2015 ku-2: 10 AM
kunjalo, uma unesifiso sedeshibhodi ngingakuhamba ngayo it
Okthoba 5, 2015 ngo-11: 19 AM
Ulwazi Olukhulu… .Lusizo kakhulu kubaqalayo… ..Siyabonga ngokunikezela ngalo…
Okthoba 8, 2015 ngo-5: 57 AM
Kuhle, ake ngandise uhlu lwakho ngethuluzi lamahhala le-seo audit. http://seocamel.com
I-Oct 8, i-2015 ku-8: i-14 PM
Kungezwe uLarry! Ngiyabonga.
Dec 29, 2015 ngo-10: 58 PM
Okuthakazelisa kakhulu, bengazi ukuthi amathuluzi amaningi kangaka asemakethe… Manje ngizoya ngakunye ngibheke ukuthi zinikezani.
Ngo-Apr 29, i-2016 ku-8: 42 AM
Uhlu olukhulu uDouglas! Ngabe ucabanga ukuthi lelo nani lamathuluzi we-SEO lizoncipha njengoba imakethe igcwele? Kubukeka sengathi wonke umuntu wenza amathuluzi kulezi zinsuku.
Ngo-Apr 29, i-2016 ku-3: i-38 PM
Izindleko zokufaka ekwakheni ithuluzi lakho ziphansi ngendlela emangalisayo, ngakho-ke angikholwa ukuthi kunjalo. Eqinisweni, sisebenza sodwa njengamanje. Inkinga, nokho, ukuthi amaningi ala mathuluzi awazange ahambisane nama-algorithms ngakho-ke anikezela ngemininingwane engeyiyo engeke ikhiqize imiphumela noma ilimaze inkampani ewasebenzisayo. Iseluleko sami kungaba njalo ukufuna ubuchwepheshe bomxhumanisi we-SEO onesizinda esiqinile.
May 5, 2016 ku-1: 01 PM
Kulondolozwe ohlwini lwami lwamabhukhimakhi. Ngiyabonga. Kepha nginombuzo, uma ukhuluma ngethuluzi le-webmaster le-google, kungani ungakhulumi nge-bind WMT ne-yandex WMT? ya, ngiyazi ukuthi kwabanye abantu i-google = yonke i-Intanethi, kepha hhayi eyabo bonke abantu. Ngiyazi abantu abaningi abasebenzisa i-bing njengenjini yokusesha ezenzakalelayo.
May 5, 2016 ku-11: 24 PM
Olesya, iphuzu elivumelekile.
May 19, 2016 ku-1: 40 AM
Uhlu oluwusizo kakhulu lwamathuluzi we-seo. Ngisebenzise cishe lezi.
Jul 26, 2016 ku-4: 16 AM
Bathandekayo nonke mfowethu nodadewethu, ningathanda ukuchaza nge-baclink ku-alexa.com?
le yiwebhu yami:
lapho ngibheka i-alexa, kukhona iwebhusayithi eyi-2 kuphela exhumanisa nehhovisi lami lewebhusayithi. noma kunjalo, nginokuningi kokudala i-akhawunti ezinkundleni zokuxoxisana. ngakho-ke ingaxhumanisa isikhathi esingakanani nehhovisi lami lasentshonalanga. ngiyabonga ngomusa wakho.
Abrar - AP Web Izixazululo
Okthoba 3, 2016 ngo-9: 25 AM
Amathuluzi amaningi kakhulu. I-SEM Rush iyintandokazi yami uma kukhulunywa ngokuthengisa futhi iMajestic / Ahrefs iyona engcono kakhulu yokuhlanganisa. Enye engiyithanda kakhulu yiMozcast. Akusilo ithuluzi lobuchwepheshe, kepha kuhle ukuqinisekiswa lapho ubona ukunyakaza okuningi kuma-SERPs bese uthola ukuthi akuwena wedwa futhi kukhona ukuvuselelwa okukhulu okwenzekayo - njengoba bekunamasonto ambalwa edlule
Ngo-Apr 29, i-2017 ku-7: i-30 PM
I-SEO inkulu kakhulu futhi ngisanda kuqala ukuba yinye. Ngempela kuningi ongakufunda. Ngizizwa ngicindezelekile manje, sengikwazi ukugaya kakhulu. Uqale kanjani? Ngabe uke uzizwe uthanda ukukhala ubuthongo bakho ngoba ungaqiniseki ukuthi uzophumelela noma cha?
May 1, 2017 ku-8: 08 PM
Qala ngokukhiqiza okuqukethwe okuhle kwezithameli zakho. Ukusesha kuyisiteshi, hhayi isu. Isu lakho kufanele kube ukuqhubeka nokuhlinzeka ngenani kumathemba akho nakumakhasimende.
UMarcin - 22 Isitudiyo
Nov 8, 2017 ngo-9: 18 AM
Ngingancoma i-unamo, phambilini ibibizwa ngokuma. Iwusizo kakhulu futhi ishibhile uma iqhathaniswa nabancintisana nabo.
Jul 22, 2018 ku-6: 20 AM
Uhlu olukhulu lweDouglas, i-SERPtimizer iyithuluzi le-seo elizungeze konke elinokuhlwaya okuhlukile kokuhlwaya nokuhlaziywa komncintiswano. Kungaba yinto yokwengezwa?
Jul 22, 2018 ku-11: 25 AM
Ngiyabonga Erich, ungeze!
Jul 24, 2018 ku-10: 32 AM
Lolu uhlu oluhle- wonke amathuluzi amahle abhalwe ndawonye!
Ingabe ithuluzi iCocolyze.com yinto engangezwa? Kuyithuluzi lokulandela umkhondo nge-interface enhle nedatha ethembekile. Kungaba mnandi ukubona ukuthi wena noma abanye nicabangani ngakho futhi.
Jul 31, 2019 ku-11: 01 AM
Ngibonile ukuthi iMoz ayikho ohlwini…? Futhi, ngisebenzisa inguqulo ekhokhelwayo yeBuzzSumo ukubheka ama-backlinks.
Hawu, ngiyaxolisa ngishiye labo ngaphandle. Ngiyabonga uFrank - ngizokuvuselela lokhu. Womabili la mapulatifomu abelusizo olukhulu.
ngidinga ithuluzi le-seo pls lingikhombise ukuthi iliphi ithuluzi elihle
Sawubona Mazhar, lokho kuncike impela kulokho ozama ukukufeza. Ngabe uzama ukwengeza indawo yakho ukuze ibe sezingeni eliphilayo? Ngabe uzama ukuncintisana kusesho olukhokhelwayo? Ngabe uzama ukusheshisa isiza sakho? Ngabe uzama ukwenza ucwaningo lokuncintisana? Ziyini izinhloso zakho?
ngifuna ukulinganisa isiza sami
Isincomo sami kuzoba ukuqala ngaso I-Google Search Console (mahhala) lapho ungabhalisa khona isiza futhi ubheke noma yiziphi izinkinga, sebenzisa Ukuqonda kwamakhasi ukwenza ngcono ukusebenza kwesayithi lakho (mahhala) lapho-ke ungafisa ukwenza i- Ukucwaningwa kwe-SEO, ngemuva kwalokho kufanele wenze ukuhlaziywa okuncintisanayo okuqondile bese usebenza ekwenzeni okuqukethwe kwekhasi lakho kube ngcono kunabancintisana nabo. Ngalokho, ngisebenzisa SEMrush.
Bengilokhu ngisebenzisa ama-ahrefs namathuluzi we-Moz Free SEO futhi ngicabanga ukuthi lawo mathuluzi we-SEO kumele abe nawo wonke umuntu kufanele azame. Ngiyabonga ngendatshana enhle. Ngingathanda ukuyithola njengoba ngihlose ukwethula ihabhu entsha yolwazi kuwebhusayithi yethu ( I-Doodle Digital ). Ngiyabonga!
Lokho bekungukuthunyelwe okufundisayo.Kumaviki ambalwa edlule, bengifuna ithuluzi elihle le-SEO ukulandelela ukusebenza kwami ​​kwe-SEOperformance. Amathuluzi amaningi owakhulumile abemasha ngokuphelele kimi. Siyabonga ngokwabelana ngamathuluzi wokulandela ngomkhondo amangalisayo. Ngisanda kusebenzisa ithuluzi lokuhlola le-SERP, i-Serpple. Ungaphinda uhlole ithuluzi lokulandela idatha esezingeni elingukhiye. Ngaphezu kwalokho, ungabhala i-athikili echaza izinzuzo zokusebenzisa ithuluzi le-SERP Checker le-SEO ezinsukwini ezizayo. Lokhu kungasiza abathengisi bedijithali njengami.
Ngiyabonga Rachael, ngingeze i-Serpple ohlwini!
Siyabonga ngokucabangela kwakho.
Mar 16, 2021 ku-2: 18 PM
Cishe umuntu ngamunye ohlwini lwakho. Kepha ngiyalithanda ithuluzi le-google GWM. Enye yezinto ezinhle kakhulu. Kungcono kakhulu kimi
Mar 16, 2021 ku-7: 15 PM
Kancane kancane, kepha ngicabanga ukuthi kuyathuthuka!